Kuyini Ukubheja kweBhonasi 2022 - OnlineCasinosOnline
Ikhaya / Imihlahlandlela / kuyini ukubheja kwebhonasi
Kuyini Ukubheja kweBhonasi
Ukubheja ngamabhonasi kulapho usebenzisa ukunikezwa kwamabhonasi ekhasino aku-inthanethi ukupaka i-bankroll yakho. Uma uhlela ukudlala ku-inthanethi njalo, ungahle usebenzise ukubheja ngamabhonasi ukuze kuzuze wena. Kulesi sigaba, sichaza ukuthi kusebenza kanjani ukubheja noma izidingo zokudlala.
Izidingo Zokudlala noma Zokubheja
Ikhasino lingakunika ibhonasi efanayo engu-100% efinyelela ku-R1,000 ngemfuneko yebhonasi engu-20x noma imfuneko yokudlala. Kusho ukuthini lokhu? Make sithi ufake imali engaphezulu kuka-R1,000, bese unikezwa ibhonasi engu-R1,000, ukhuphule ibhalansi yakho ibe ngu-R2,000. Awukwazi ukuhoxisa kuze kube yilapho usubeke inani lokubheja noma ukubheja kuka-R40,000 ukubheja noma ukubheja emidlalweni efanelekile yekhasino eku-inthanethi ekhasino. (R1,000 + R1,000 X 20 = R40,000)
Amakhasino asebenzisa amabhonasi ekhasino aku-inthanethi ukukhuthaza abadlali ukuthi bavakashele amawebhusayithi abo. Kulo mhlahlandlela sizofaka amanye amabhonasi ekhasino aku-inthanethi athandwa kakhulu.
Amabhonasi ekhasino wamahhala / amabhonasi wekhasino engena Diphozithi
Ibhonasi yekhasino yamahhala ibizwa nangokuthi ibhonasi yediphozithi, futhi ibhonasi yekhasino eku-inthanethi ekuvumela ukuthi uthole imali yekhasino ngaphandle kokwenza idiphozi. Ikhasino eku-inthanethi okukhulunywa ngalo lifaka nje imali ku-akhawunti yakho yokugembula, imvamisa lapho ubhalisa i-akhawunti yemali yangempela, ukufaka isikhuthazo sokuthi uqale ukudlala nesoftware yabo. Iningi lamahhala leminikelo yamabhonasi ekhasino liseduze kwamakhulu ayikhulu noma ikhulu namashumi ayisihlanu eRandi.
Lolu hlobo lwebhonasi lubizwa nangokuthi ukubhalisa noma ibhonasi entsha yomdlali. Ibhonasi eyamukelekile imvamisa iyinhlobo yokuqala yamabhonasi ozohlangana nayo ngekhasino eku-inthanethi, ngaphandle kokuthi banikeze ibhonasi engafakwanga idiphozi ngaphambili. Lokhu futhi kungukuphela kwebhonasi yekhasino enikezwa yibo bonke amakhasino aku-inthanethi.
Lolu hlobo lwamabhonasi luyahlukahluka kuye ngokuthi ufaka malini kodwa imvamisa iphakathi kuka-50 no-500%. Ibhonasi yamaphesenti ayi-100 ibizwa ngebhonasi yokufanisa ngoba ikhasino izolingana cishe nanoma yiliphi inani olifaka kubo.
Lolu hlobo lwebhonasi unikezwa lona ukuqinisekisa ukuthi uqhubeka nokufaka imali kwi-akhawunti yakho yekhasino eku-inthanethi. Ibhonasi yokulodiwa kabusha iyefana neBhonasi Yokwamukela futhi imvamisa ikunikeza amaphesenti ayikhulu aze afike ekhulwini lamadola (cishe i-R1000).
Amakhasino aku-inthanethi anika amabhonasi okuthembeka kubadlali abake bahlala nabo isikhashana futhi basebenzise nemali ethile nabo. Uma uhlala isikhathi eside ngekhasino eku-inthanethi futhi nemali oyifaka kakhulu, kulapho uzoba khona kakhulu i-VIP futhi uzothola amabhonasi amaningi okuthembeka.
Amabhonasi e-High Roller Casino
Amabhonasi e-Highroller Casino enzelwe ukukhuthaza abadlali abadiphozithi abakhulu. Lokhu kuhlukahluka kwebhonasi yekhasino ye-inthanethi kuyazuzisa impela futhi kwesinye isikhathi kungadlula i-R1000 futhi kuvame ukuza kube yibhonasi engamaphesenti angamashumi amahlanu. Lokhu kungasho ukuthi uma ufaka izinkulungwane ezimbili zamaRandi aseNingizimu Afrika, uzothola imali eyinkulungwane eyengeziwe ozodlala ngayo.
Ibhonasi Yediphozi Ethandawayo
Amakhasino aku-inthanethi anikela ngamabhonasi wediphozi athandwayo kubadlali abasebenzisa amasistimu abo wediphozi abayithandayo. Imvamisa uthola lokhu uma ukhetha ukusebenzisa enye yezinketho zabo zokukhokha ezisohlwini ze-elektroniki. Lawa makhasino aku-inthanethi azoba nezizathu zawo zokuthi kungani angathanda ukuthi usebenzise olunye lwezinhlelo zawo zokukhokha ezikhethwayo. Imvamisa babambisana nale nkampani futhi lokhu kusho ukuthi bathola izaphulelo ezikhethekile zokusebenzisa lolu hlelo futhi izindleko zokucubungula zamakhasino ziphansi kakhulu kunamakhadi esikweletu.